နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ... မိုးနှင့်အတူ! graphene နှင့်အတူနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ် | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို…မိုးရွာရွာနှင့်အတူ။ graphene နှင့်အတူနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်
ဒံယေလ Palomino | | Photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်, NOTICIAS
မင်းပြောနိုင်မယ် မိုးနှင့်အတူနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ် ဘယ်လိုနေမလဲ
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာမရရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားပြီးဖြစ်သည် photovoltaic ဆဲလ်တွေသူတို့ရဲ့ထိရောက်မှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းကိုမိုးရာသီတွင်ရည်ညွှန်းသည်။
၎င်းကို ပြောင်းလဲ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်အုပ်စု၏ခေါင်းဆောင် Qunwei Tang တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်များဘယ်လိုလေ့လာနေသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်ဖွံ့ဖြိုး ဒါကလုပ်နိုင်တယ် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည် ၏အကူအညီဖြင့် မိုးစက်တွေ။
အကယ်၍ သူတို့အောင်မြင်ခဲ့ပါကနေစွမ်းအင်သည်အားနည်းချက်နှင့်၎င်း၏ပခုံးပေါ်မှ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးများစွာကိုယူဆောင်သွားမည်မှာသေချာသည် မိုးအုံ့။ မိုးရာသီတွင်အမြတ်အစွန်းမရနိုင်ပါ။
ဒီနှုန်းမှာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ပြိုင်ဘက်ကင်းဖြစ်လိမ့်မည် အခြားပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်၊ နေသာသောနေ့၌စွမ်းအင်ပမာဏများစွာထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးဆောင်းပါး၌တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်းမိုးနည်းသည့်နေ့များထက်အနည်းဆုံးထက်ဝက်ခန့်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်လျော့နည်းနိုင်သည်ဟုပြောနိုင်သည် အခြားစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနေစွမ်းအင်။
Ya ဤနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်အသစ်တီထွင်မှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်မိုးရေများဖြင့်ဆက်လက်ထုတ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင် icing ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် Qunwei Tang ဦး ဆောင်သောဤသိပ္ပံပညာရှင်များအုပ်စုသည် graphene အသုံးပြုရန်စဉ်းစားပါပြီ ကဆိုပါတယ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်။
ကျောက်ခေတ် အမှု၌သင်သည်သူ့ကိုမသိရ ကာဗွန်စင်ကြယ်စွာပါဝင်သည်၎င်း၏အက်တမ်များသည် graphite ကဲ့သို့ပုံမှန်ပုံစံဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဂရပ်ဖင်၏အက်တမ်တစ်ခုသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်သည် သံမဏိကိုယ်ထည်ထက်အဆ ၂၀၀ ပိုခိုင်သည် နှင့်၎င်း၏သိပ်သည်းဆကာဗွန်ဖိုင်ဘာနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ် လူမီနီယံထက်ပိုမိုပေါ့ပါးသည် (5 ကြိမ်ပိုမိုပေါ့ပါး) ။ ဒါဟာအစဖြစ်ပါတယ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကောင်းသောစပယ်ယာ။
ကောင်းပြီ, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်အသစ်သည်အနုမြူမှုန်တစ်ခုအနေဖြင့် graphene အလွှာတစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားသည် ထို့အပြင်၎င်းသည်မိုးရေစက်များမှနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
စဉ်းစား နိုင်ငံအတော်များများအလွန်မိုးရာသီထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည် ထိုကဲ့သို့သောတရုတ်, နယူးဇီလန်, ဟာဝိုင်ယီ၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် နှင့်ဆိုလာပြားများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မှာဤမိုးလေ ၀ သဖြစ်စဉ်ကြောင့်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်၊ ဒီနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အတွက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤသည်သော graphene အလွှာအချို့အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
ငါ graphene ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်ယခင်ကငါပြောခဲ့သကဲ့သို့လျှပ်စစ်၏ကောင်းသောစပယ်ယာဖြစ်ခြင်း အီလက်ထရွန်အမြောက်အများသည်အခွံ၏မျက်နှာပြင်ကို ဖြတ်၍ ရွေ့သွားနိုင်သည်။
မိုးရွာတဲ့အခါ Lewis ကအက်ဆစ် - အခြေစိုက်စခန်းတုံ့ပြန်မှု အရှင်ခွင့်ပြု စွမ်းအင်မျိုးဆက်။
အဆိုပါ Lewis ကအက်ဆစ် - အခြေစိုက်စခန်းတုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်ကြားနေတုံ့ပြန်မှု ၎င်းသည်အက်စစ်နှင့်ဆားနှင့်ရေထုတ်လုပ်သည့်အခြေစိုက်စခန်းအကြားဖြစ်ပေါ်သောဓာတုဓာတ်ပြုမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆားဟူသောစကားလုံးသည်အောက်ဆီဂျင်သည်မည်သည့် ionation ဒြပ်ပေါင်းကိုမဆိုအခြေခံသည်+ NaOH နှင့်သူ၏ anion သည်အက်စစ် (Cl ။ ) မှလာသည်- HCl) ။
Neutralization တုံ့ပြန်မှုများသည်ယေဘုယျအားဖြင့် exothermic ဖြစ်ပြီးဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်အပူပုံစံဖြင့်စွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှတ်သည်။ ဒီမှာဆုပါ!
၎င်းကိုအက်တမ်တစ်ခုသည်အခြေခံနှင့်ဓာတ်ပြုသည့်အခါတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုပျက်စေသောကြောင့်သူတို့ကိုမကြာခဏကြားနေခြင်းဟုခေါ်သည်။
ဒီဆိုလာဆဲလ် ဒီဇိုင်းနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအဆင့်၌တည်ရှိ၏ ဆိုလိုတာကစျေးကွက်မှာမြင်တွေ့ရမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိနေသေးတယ် (ဒီနည်းပညာအသစ်ကိုအငြင်းပွားနေပေမယ့်စျေးနှုန်းတောင်မှမရှိသေးဘူး) ။
ထိုအချိန်မှစ၍ လုပ်ရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရန်များစွာရှိသေးသည် သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်.
ယခု အထွက်နှုန်းမှာ ၆.၅% ရှိသည်။ကျနော်တို့အများစုကိုတွေ့မြင်လျှင်အလွန်နိမ့်တန်ဖိုး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားယခု ဘယ်သူလဲ 22% အထွက်နှုန်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ခြင်းမှအလှမ်းဝေးသောနေရာ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » Photovoltaic နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် » နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို…မိုးရွာရွာနှင့်အတူ။ graphene နှင့်အတူနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်